Manchester City Oo Raadineysa Bedelka Saxda Ah Ee Sergio Aguero.
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester city oo Raadineysa bedelka saxda ah ee Sergio Aguero.
February 10, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Manchester City ayaa u baahnaan doonta inay raadiso weeraryahan iyadoo bartilmaameedka ugu sareeya ka dhiganeysa Lautaro Martinez kaas ooqarka u saaran inuu ka yimaado kooxda man city iyo Premier League.
Pep Guardiola ayaa u arka bedelka saxda ah ee xidiga reer argentina sergio aguero xidiga reer argentin ayaa ku jira waayihiisa ugu dambeeyey ee garoonka Ethihad sidoo kale Martinez ayaa qarka u saaran inuu ku sii nagaado Serie A isagoo ku farxo tababare Antonio Conte iyo kooxdaiisa inter Milan.
Eurosport ayaa soo warinaysa in raadinta City ee ciyaartoyda ugu sareysa suuqa uu liiska koobaad igu jiro xidiga reer argentina Martinez oo sidoo kale qarka u saaran inuu heshiis cusub la galo Inter.
Warbixinta ayaa intaas ku dareysa in 21 sano jirka caalamiga ah ay inter laba jibaari doonto lacagtiisa si ay ugu sii hayaan Talyaaniga, iyagoo dharbaaxo ku dhuftay City ka dib markii ay si dhow ula socdeen xaaladiisa muddo sannad ah.
In kasta oo City ay sii waddo diyaarinta dalab ay u jeedinayso Lionel Messi haddii uu go’aansado inuu ka tago Barcelona, waxaa sidoo kale lagu wadaa inay dareenkooda u weeciyaan weeraryahanka Dortmund Erling Haaland